Beertone Beddelka Midabka Biirka - Joornaalka Naqshadeynta
Beddelka Midabka Biirka
Isniin 5 Bisha Todobaad 2021
Beddelka Midabka Biirka Beertone waa Tilmaanta Tixraaca Beer ugu horeysa ee ku saleysan midabada kala duwan ee biirka, oo lagu soo bandhigay taageere foomka galaaska ah. Daabacaaddii koowaad waxaan ka soo uruurinay macluumaad 202 noocyo kala duwan oo ah noocyo kala duwan, oo socdaal ku maraya dalka, Bariga illaa Galbeedka, Waqooyi ilaa Koonfur. Hawsha oo dhami waxay qaadatay waqti badan iyo saami macquul ah oo la sameeyo laakiin natiijada labadan xiiseyn ayaa si wada jir ah nooga dhigaysa kuwo aad iyo aad u sharaf leh oo qoraallo hore loo sii qorsheeyay. Farxad!
Magaca mashruuca : Beertone, Magaca naqshadeeyayaasha : Alexander Michelbach, Magaca macmiilka : Beertone.
Naqshadeynta wareysiga ee maalinta
Wareysiyada lala yeelanayo nashqadeeyayaasha caanka ku ah adduunka.
Sabti 3 Bisha Todobaad 2021
Akhri wareysiyadii ugu dambeeyay iyo wada hadaladii ku saabsanaa naqshadeynta, hal abuurka iyo hal abuurka inta udhaxeysa saxafiga nashqadeeyaha iyo naqshadeeyayaasha caanka ah aduunka, farshaxanada iyo qaabeeyaha. Eeg mashaariicda naqshadeynta ee ugu dambeysay iyo naqshadayaasha abaalmarinta abaalmarinta oo ay sameeyeen naqshadeeyayaasha caanka ah, farshaxannada, naqshadaha iyo hal-abuurayaasha. Soo hel fikradaha cusub ee hal-abuurka, hal-abuurka, farshaxanka, naqshadeynta iyo qaab-dhismeedka. Baro qaababka naqshadeeyayaasha naqshadeeyayaasha waaweyn.
Beddelka Midabka Biirka Alexander Michelbach Beertone